कस्ति थिईन सानोमा पूजा शर्मा ? उनकै आमाले खोलिन बच्चाको यस्तो पोल (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityकस्ति थिईन सानोमा पूजा शर्मा ? उनकै आमाले खोलिन बच्चाको यस्तो पोल (भिडियो)
कस्ति थिईन सानोमा पूजा शर्मा ? उनकै आमाले खोलिन बच्चाको यस्तो पोल (भिडियो)
May 1, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Female, Kollywood, News, Videos 0
सोमबार मात्रै आफ्नो जन्मदिन मनाएकी नायिका पूजा शर्माको जनमदिन समारोहमा कलाकर्मी तथा मिडियाकर्मी बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्थ्यो । पूजाको जन्मदिन समारोहमा उनकी आमा दुर्गा शर्मा पनि सहभागी थिईन् । आमालाई आफ्नो जन्मदिन समारोहमा अभिनेत्री पूजाले आफ्नो आमाकै कारण अहिलेको अवस्थासम्म आईपुगेको बताएकी थिईन् ।
पुजाको जन्मदिन समारोहमा उपस्थित उनकी आमाले पूजाको बाल्यकालको उट्पट्याङलाई सार्वजनिक गरिदिदा पूजा लाजले पानी–पानी भएकी थिईन् । नायिका पूजाकी आमाले जनाए अनुसार सानोमा पूजाले जे गर भन्यो त्यो नगर्ने तथा नगर भनेको काम झन् गरेर देखाउने गर्थिन् अरे । दुर्गाले पूजालाई निकै ज्ञानी छोरी तथा हिरोइनमा सबै देशले रुचाएको हरेक नेपालीको छोरी भएको दुर्गाको भनाई छ । पूजाले सानोमा आफ्नो आमालाई दिदी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थिन ।
अनमोलका डुप्लिकेट अभिषेकको श्रृष्टीसँग रोमान्स (भिडियो)
कलाकर्मी तथा मिडियाकर्मीको नजरमा को हुन् पूजा शर्मा ? यस्तो छ उनीहरुको प्रतिक्रिया (भिडियो)